Retained Placenta – My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ယဘြေုယအြားဖွငျ့ ကလေးမှေးဖှားပွီးတဲ့နောကျသိပျမကွာခငျမှာ သားအိမျရဲ့ကြုံ့အားကွောငျ့…သိပျမကွာခငျမှာ အခငျြးပါ တပါတညျး မှေးဖှားလရှေိ့ပါတယျ..။ ဒါက သဘာဝပါ….။ ဒီလိုမဟုတျဘဲ ကလေးမှေးဖှားပွီး နာရီဝကျနဲ့အထကျ ကွာသညျ့တိုငျအောငျ အခငျြးက သားအိမျထဲမှာပဲ ရှိနသေေးတယျဆိုရငျတော့ အခငျြးကပျတယျလို့ ချေါပါတယျ…။
အဓိကအားဖွငျ့တော့ ဒီလို အခငျြးကပျစတေဲ့ အကွောငျးအရငျး သုံးခုရှိပါတယျ..။
(၁) သားအိမျက အခငျြးအပွငျထှကျနိုငျလောကျအောငျ လုံလုံလောကျလောကျ ညှဈအားမရှိတဲ့အခါ အခငျြးကပျခွငျးဖွဈတတျပါတယျ..။
(၂) အခငျြးက သားအိမျနံရံထဲအထိ ထိုးဖောကျတှယျကပျနတေဲ့အခါ အခငျြးကပျနိုငျပါတယျ..။
(၃) အခငျြးက သားအိမျအပျေါပိုငျးထိပျနားမှာ မရှိဘဲ သားအိမျခေါငျးနားထိရောကျတဲ့ အခငျြးရှရေ့ောကျတဲ့အခါမြိူးမှာလဲ အခငျြးကပျတတျပါတယျ..။
အခငျြးကပျတဲ့အခါ ဆရာဝနျတှအေနနေဲ့ သားအိမျညှဈအားကောငျးစတေဲ့ ထိုးဆေး ကို လိုအပျသလို ထိုးပါလိမျ့မယျ..။ အဲဒီနောကျ ကပျနတေဲ့ အခငျြးပိုထှကျလာမလာ စဈဆေးပွီး ပိုရှညျထှကျလာတယျဆိုရငျတော့ အခငျြးကို ဖွေးဖွေးခငျြး ခလြိုကျမှာဖွဈပါတယျ..။ သားအိမျကို လဲ သာသာယာယာ ဖိပှတျပွီး ညှဈအားကောငျးစဖေို့ သဘာဝနညျးနဲ့ ပံ့ပိုးပေးမှာဖွဈပါတယျ..။
လိုအပျရငျ သားအိမျကြုံ့တဲ့ဆေးကို drip ပုလငျးနဲ့ အစကျခပြွီးလညျး ပေးနိုငျပါတယျ…။ ဆရာဝနျက လိုအပျရငျ ကပျနတေဲ့အခငျြးကို လကျနဲ့လှညျ့ပွီးထုတျတာ ဒါမှမဟုတျ ခှဲခနျးထဲဝငျပွီး သငျ့တျောတဲ့ မဆေ့ေးထုံဆေးကိုသုံးပွီး ထုတျတာမြိူးလဲ ရှိနိုငျပါတယျ..။
မှေးလမျးကွောငျးမှ အနံ့ဆိုးသော အရညျဆငျးခွငျး
နို့မထှကျခွငျး … စတဲ့ လက်ခဏာတှရှေိနိုငျပါတယျ..။
ဒီလို လက်ခဏာတှရှေိရငျတော့ ဆရာဝနျနဲ့ပွသပွီး ကုသမှူကို မွနျမွနျခံယူသငျ့ပါတယျ..။
အခငျြးကပျဖူးတဲ့ ကလေးမိခငျတဈယောကျအနနေဲ့ သတိပွုသငျ့တာကတေော့ … နောကျတဈခါကိုယျဝနျမှာလညျး အခငျြးကပျတာထပျဖွဈနိုငျခရြှေိတယျ ဆိုတာပါပဲ..။ ဒါကွောငျ့ အခငျြးကပျဖူးသူ အမြိူးသမီးတှအေနနေဲ့ နောကျတဈကွိမျ ကိုယျဝနျထပျဆောငျတဲ့ အခါ …. ကိုယျဝနျကို မှနျမှနျအပျဖို့.. ညှနျကွားခကျြတှေ အတိုငျးလိုကျနာဖို့နဲ့ အထူးဂရုစိုကျဖို့ လိုပါတယျ…။
ယျေဘုယျအားဖြင့် ကလေးမွေးဖွားပြီးတဲ့နောက်သိပ်မကြာခင်မှာ သားအိမ်ရဲ့ကျုံ့အားကြောင့်…သိပ်မကြာခင်မှာ အချင်းပါ တပါတည်း မွေးဖွားလေ့ရှိပါတယ်..။ ဒါက သဘာဝပါ….။ ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ ကလေးမွေးဖွားပြီး နာရီဝက်နဲ့အထက် ကြာသည့်တိုင်အောင် အချင်းက သားအိမ်ထဲမှာပဲ ရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ အချင်းကပ်တယ်လို့ ခေါ်ပါတယ်…။
အဓိကအားဖြင့်တော့ ဒီလို အချင်းကပ်စေတဲ့ အကြောင်းအရင်း သုံးခုရှိပါတယ်..။
(၁) သားအိမ်က အချင်းအပြင်ထွက်နိုင်လောက်အောင် လုံလုံလောက်လောက် ညှစ်အားမရှိတဲ့အခါ အချင်းကပ်ခြင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်..။
(၂) အချင်းက သားအိမ်နံရံထဲအထိ ထိုးဖောက်တွယ်ကပ်နေတဲ့အခါ အချင်းကပ်နိုင်ပါတယ်..။
(၃) အချင်းက သားအိမ်အပေါ်ပိုင်းထိပ်နားမှာ မရှိဘဲ သားအိမ်ခေါင်းနားထိရောက်တဲ့ အချင်းရှေ့ရောက်တဲ့အခါမျိူးမှာလဲ အချင်းကပ်တတ်ပါတယ်..။
အချင်းကပ်တဲ့အခါ ဆရာဝန်တွေအနေနဲ့ သားအိမ်ညှစ်အားကောင်းစေတဲ့ ထိုးဆေး ကို လိုအပ်သလို ထိုးပါလိမ့်မယ်..။ အဲဒီနောက် ကပ်နေတဲ့ အချင်းပိုထွက်လာမလာ စစ်ဆေးပြီး ပိုရှည်ထွက်လာတယ်ဆိုရင်တော့ အချင်းကို ဖြေးဖြေးချင်း ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်..။ သားအိမ်ကို လဲ သာသာယာယာ ဖိပွတ်ပြီး ညှစ်အားကောင်းစေဖို့ သဘာဝနည်းနဲ့ ပံ့ပိုးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်..။
လိုအပ်ရင် သားအိမ်ကျုံ့တဲ့ဆေးကို drip ပုလင်းနဲ့ အစက်ချပြီးလည်း ပေးနိုင်ပါတယ်…။ ဆရာဝန်က လိုအပ်ရင် ကပ်နေတဲ့အချင်းကို လက်နဲ့လှည့်ပြီးထုတ်တာ ဒါမှမဟုတ် ခွဲခန်းထဲဝင်ပြီး သင့်တော်တဲ့ မေ့ဆေးထုံဆေးကိုသုံးပြီး ထုတ်တာမျိူးလဲ ရှိနိုင်ပါတယ်..။
မွေးလမ်းကြောင်းမှ အနံ့ဆိုးသော အရည်ဆင်းခြင်း
နို့မထွက်ခြင်း … စတဲ့ လက္ခဏာတွေရှိနိုင်ပါတယ်..။
ဒီလို လက္ခဏာတွေရှိရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ပြသပြီး ကုသမှူကို မြန်မြန်ခံယူသင့်ပါတယ်..။
အချင်းကပ်ဖူးတဲ့ ကလေးမိခင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ သတိပြုသင့်တာကတော့ … နောက်တစ်ခါကိုယ်ဝန်မှာလည်း အချင်းကပ်တာထပ်ဖြစ်နိုင်ချေရှိတယ် ဆိုတာပါပဲ..။ ဒါကြောင့် အချင်းကပ်ဖူးသူ အမျိူးသမီးတွေအနေနဲ့ နောက်တစ်ကြိမ် ကိုယ်ဝန်ထပ်ဆောင်တဲ့ အခါ …. ကိုယ်ဝန်ကို မှန်မှန်အပ်ဖို့.. ညွှန်ကြားချက်တွေ အတိုင်းလိုက်နာဖို့နဲ့ အထူးဂရုစိုက်ဖို့ လိုပါတယ်…။